साहित्य | Sunaulo Khabar
नेपाली साहित्यमा ऐतिहासिक उपन्यास भन्नेवित्तिकै पहिलो नम्बरमा आउँछ–सेतो बाघ । ऐतिहासिक उपन्यासकार भन्ने वित्तिकै पहिलो नम्वरमा नाम आउँछ– डायमन शम्शेर राणाको । डायमन त्यस्ता लेखक थिए, जो भन्दथे म लेखेरै बाँचेको छु । उनी सगर्व भन्थे, सार्वजनिकरुपमै भन्थे । तर...
नाम्चे पुग्दा अन्धकार भएको थियो । गुम्बाको ढुङ्गा र माटो कोठामा लगेर एउटा प्लास्टिकमा पोको पारेर एउटा कपडामा बेरें र सुरक्षितसाथ झोलामा राखें । नुवाइधुवाइ गरेर शृङ्गारिएर म तल ओर्लिएँ । मेरो त्यो रुप देखेर ल्हाक्पा र सूर्यजी छक्क...
सन् १८४० को दशकसम्म आइपुग्दा पश्चिमा मुलुकहरुमा पृथ्वीको सृष्टिसम्बन्धी एकलौटी मत थियो ।विश्वका बुज्रुकहरुमा एउटा भ्रम थियो कि भगवानले नै यो पृथ्वीको सृष्टि गरे । धर्मअनुसार सृष्टिकर्ताको नाम फरक फरक थियो । जसरी हिन्दू धर्ममा ब्रहृमालाई सृष्टिकर्ताको उपाधि दिने...
नारी आमा मकन ममता प्यार दिन्छिन् अपार हाँसो भर्छिन् हरपल खुसी दिव्य नारी मुहार । छर्छिन् आभा झलमल उनै घामकी हुन् चिनारी आमा देऊ चरणतलमा झुक्छु तिम्रै पुजारी ।।१। नारी छोरी मगमग फुली दिव्य छर्छिन् सुवास सीता गौरी सुमन सरिता नाम प्यारो छ खास...
देउराली माइज्यूका लाख–लाख यादहरु
एक बिहान उठेर आकासतिर हेरें, त्यसले त मलाई जिस्क्यायो पो ! भर्खर उठेको हुँदा निद्राको धङधङी थियो तापनि त्यसो किन भनेर वरिपरि र सुदूर टाढा सबै क्षितिजसम्मै हेरें– आकासले भर्खर मुख धोएको रहेछ । जता हेरे पनि नीलिमा मात्र,...
मेरो मुख के हेर्छौं तिमी ?
पुर्खाले लडेर बचाएको मेरो अस्तित्व तिमीले बचाउन सकेनौँ है, सबै मिली म भित्र एकछत्र अटाउन पनि सकेनौँ है । तिम्रो लाचारिपन लिएर आज लुटिएको मेरो मुख हेर्नलाई, के आउँछौ तिमी ? मातृभूमीको विकास गर्नु त कता कता, मेरै छातीमा टेकी, आ–आफू नै लड्दैछौ तिमी । तानातानको ताण्डव नाच देखाउँदै आज...